Tanora Saodiana Voasambotra Noho Ny “Faniratsiràna Ny Fivavahana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2013 22:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, বাংলা, bahasa Indonesia, عربي, English
Lehilahy Saodiana roa no voasambotry ny Kômitin'ny Fampiroboroboana ny toetra tsara sy Fisorohana ny toetra ratsy (CPVPV) tany Riyadh renivohitra noho ny faniratsiràny ny fivavahana. Nizara ny tantarany tao amin'ny Twitter i Bader Al-Rasheed @BAlrasheed sy Abdullah Al-Bilasi @3bdlla.
“@BAlrasheed: Koa satria voalohany izao nahenoako ny momba io lalàna io sy ny fihetsika manaotao foanan'ny heya indraindrai (heya no iantsoana ny CPVPV ), nankeny amin'ny fiaran'izy ireo aho ary nanontany: misy lalàna va mandrara ny fipetrahana eny amin'ireo toerana ho an'ny daholobe mandritra ny fotoana fivavahana?”
“@BAlrasheed: Aza miteny amiko ny voalazan'ny finoana, misy lalàna ve? Ny fivavahana dia safidin'ny tena manokana. Ny lalàna ihany no tsy maintsy hajaiko.”
Ny mbola mahazendana koa, nitatitra tantaranà lehilahy Libaney iray izay hitan'izy ireo tany amin'ilay tobin'ny mpitandro filaminana tany al-Sulaimaniyah i al-Bilasi sy al-Rasheed, izay voasambotra noho ny “fitsiky tsy mifanaraka amin'ny fivavahana”!
@balrasheed: Iray amin'ireo tantara tena hafahafa hitanay nandritra ny fitànana anay dia ny an'ilay lehilahy Libaney iray izay voampanga hiditra an-tranomaizina mandritra ny dimy andro. Ny heloka nataony: “fitsiky tsy mifanaraka amin'ny Sharia.”